FURUQ EE KINIISADDA: QAABABKA CUDURKA, CALAAMADAHA, SIDA LOO DAAWEEYO - BEERAHA DIGAAGA
Sidee iyo waxa loo daaweynayo furuqa xashiishka
Zooanthroponosis waa cudur u gaar ah dadka iyo xayawaanka. Haddii cudurro hore loo aqoonsaday ay dhici karto oo kaliya uun nooc xayawaan ah, ka dibna maantana marar badan ayaa jira xaalado cudurro xoolo ah oo leh cudurrada "bini'aadamka".
Mid ka mid ah cudurrada noocaas ah ee xanuunka-anthroponotic waa furuqa, cudur faafa oo ba'an oo lagu gartaa finanka daahirsan iyo maqaarka maqaarka. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa sida loo daweeyo furuqa xayawaanka, waxa noocyadan cudurkan ku helaa shimbiraha, iyo tallaabooyinka ka hortagga ah.
Pigeon pox: waa maxay?
Pigeon pox waa cudur fayras ah kaas oo ku baahsan adduunka oo idil wuxuuna saameynayaa inta badan shimbiraha yar yar. Waxaa jira laba nooc: maqaarka iyo gawracatada. Sida caadiga ah, heerka ugu horeeya ee maqaarka maqaarka ee kiniisadda si fiican loo daweeyey, iyo xamaamka xanuunsan ee jiran helay jir difaac dheeriga ah. Neefsashada jeermiska ayaa aad u khatar ah: Waxay dhakhso u faaftaa shakhsiyaadka caafimaadka qaba waxayna saameeyaa dheecaanka sanka (shimbirta waxay bilaabmaysaa inay la kulanto dhibaatooyinka helitaanka ogsijiinta oo waxay dhiman kartaa iyada oo aan loo baahnayn waqtigeeda). Labada nooc ee furuqa ayaa u sabab ah joogitaanka deegaan gaar ah iyo qaar ka mid ah waxyaaba xanbaarsan. Tusaale ahaan:
la xiriirka shimbiraha cudurka qaba;
hawada qoyan ee dovecote, qoyaan, drafts iyo joogitaanka caaryada;
nadiifinta digirta qashinka iyo liiska;
hawada kulul ee xad-dhaaf ah ama, si tartiib ah, qabow;
caabbinta kordhay ee qolka gudaha ee sanka si ay u galaan fayraska;
luminta xad dhaafka ah ee boodada inta lagu jiro molting;
biyaha wasakhaysan, iwm.
Inta badan, ugu faafidda cudurka wuxuu dhacaa inta lagu jiro xilliga diirimaadka: marka hore, jawi wanaagsan ayaa loo aasaasey kooraska infekshinka hawada, iyo, marka labaad, cimilada kulul, difaaca jirka ee kiniisadda si aad u yar.
Waa muhiim! In kasta oo xaqiiqda ah in furuqu uu badanaa ku dhaco shimbiraha yar yar, dadka qaangaarka ah ayaa ah kuwa sidey xanuunka - waxay ku hayn karaan fayraska jirkooda ilaa laba bilood, halka shimbirahan aan laheyn calaamado dibadda ah. Shimbiraha cudurka qaba ee qaangaarka ah waxay u gudbin karaan infakshanka xayawaanka yaryar iyada oo loo marayo dhoobada, dheecaanka xuubka iyo biyaha (marka biyaha la cabo khamri isku mid ah).
Marmarka qaarkood furuqa ayaa laga qaadi karaa xayr xanuunsan ilaa mid caafimaad qaba iyada oo loo marayo shilinta, duufka dhiigga iyo cayayaanka kale - si kastaba ha ahaatee, habkan loo gudbiyo fayrasku wuxuu ku dhacaa dabeecadda inta badan.
Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo ah cudurkan soo boodda ah, taas oo ku xiran nooca infekshinka shimbirta - maqaarka iyo gawracatada. Marka ugu horeysa, shimbirta qaangaarka ah waa jiran tahay, gaar ahaan inta lagu jiro maadada: waqtigaan xiga qoolku 'xiriirka kale oo kordha, iyo iyada oo loo marayo nabarrada yaryar ee ay ku sameeyaan ragga kale ee guluubka, infekshanka adhiga ayaa si dhakhso ah loogu gudbiyaa. Dhallaanka yar yar ee furuqa ayaa laga soo qaataa dadka qaangaarka ah, badanaa marka ay dhallinyarada ku quudiyaan kijo. Aan ka fekerno faahfaahin dheeraad ah qaababka kala duwan ee qaab kasta iyo muuqaalka furuqa.
Noocani wuxuu calaamad u yahay muuqaalka maqaarka agagaarka sanka, furfurnaanta dhegaha, iyo sidoo kale xuddaha afka qanjidhada yar ee nabarada cas ee yar - ospinok, oo kaddibna sameeyaan koboc weyn oo casaan ah. Xaalad aad u daran oo socod ah, cudurku ma saameeyo kaliya maqaarka, laakiin sidoo kale unugyada xubnaha gudaha, taas oo keenaysa dhimashada shimbirta. Badanaa, furuqa wuxuu saameeyaa xuubka indhaha - xaaladdan waxaa ku jira sawir-qaadasho, jeexjeexin xad-dhaaf ah, barar iyo casaanka indhaha, dheecaan daahir leh, muuqaalka koritaanka wafka ee geesaha indhaha.
Iyaga oo lagu guul daraysto kiniinada furuqa waxay noqdaan kuwo ciriiri ah, lumariisto, cuntadoodu waxay sii xumaataa, iyo baalasheeda ayaa had iyo goor hoos u dhacaya. Xilliga xagaaga ee furuqa maqaarka ee xagaaga waa 1-2 bilood (tani waa wakhti firfircoon ee fayruska, oo awood u leh inay qaadsiiso shimbir kasta oo caafimaad qaba), iyo xilliga jiilaalka - 3-4 bilood (hargabku wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshaa fayraska, "wuxuu ilaaliyaa" waxqabadka).
Ma taqaanaa? Guud ahaan, waxaa jira ilaa 300 nooc oo xayawaan ah - shimbirahaasi waxay ku nool yihiin meel kasta oo ka mid ah adduunka (marka laga reebo gobollada aadka u qabow). In ka badan 30 magaalo oo ka mid ah meeraha ayaa leh qaar ka mid ah "shimbiraha adduunka".
Calaamadaha cudurka furuqa ee qufaca ayaa ah furuqa gudaha sanka, caleenta, iyo musqulaha. Mararka qaarkood, marka lagu daro koritaanka, mucosa sanka ayaa adkeynaya filim cufan oo midabka huruud ah. Cambaarta furuqa ayaa hor istaagaya neefsiga xayawaanka - shimbiraha qaba infakshanka xayawaanka, naxdinta, iyo sidoo kale ay ku adagtahay inay wax cunaan oo cabbaan. Cudurka noocan ah waxaa badanaa la yiraahdaa "cough yellow": waxaa xusuus mudan in qaabka gawracatada uu badanaa yahay nooca joogtada ah. Mararka qaarkood noocyo kala duwan oo furuq ah ayaa sidoo kale la arkayaa - marka xayrta infekshanku muujiso calaamadaha maqaarka iyo gawracatada labadaba. Tani waa nooca ugu xun ee cudurka, badanaa keena dhimasho: marka lagu daro dhibaatooyinka helitaanka ogsijiinta iyo cunno la'aanta, maqaarka dibadda (iyo inta badan xubnaha gudaha) ee xamaamka ayaa lagu daboolayaa filim adag oo fayow, kaas oo kor u kaca kobaca. Marka ugu yaraan hal calaamad oo ka mid ah cudurka furuqa ee xayrta ama isbedel muuqda nooca dhaqanka (iyo sidoo kale haddii ay diidaan cuntada, lumista aanad lahayn ee baalasha, iwm.), Waa inaad si deg-deg ah u karantid shimbirta xanuunka iyo bilaabi daaweyn.
Waa muhiim! Mararka qaarkood "shimbir jaalaha ah" in qoolley yar yar laga yaabaa in la sameeyaa sababtoo ah trichomoniasis, iyo ma gawracatada. Cilmi-baaris sax ah ayaa laga heli karaa iyada oo la tashanaayo dhakhtar xoolaad iyo tijaabooyin tijaabo ah.
Sidee loo daweeyaa furuqa xashiishka
Daaweynta xayawaanka bukaanka ah waa habab aad u dheer. Si loo guuleysto furuqa furuqa, waxaa lagama maarmaan ah, ugu horreyntii, si loo baaro xoolaha iyo go'aaminta heerka shimbirta. Haddii marxaladu soo daahdo, cudurkuna waa mid kacsan oo daal ah, markaa shimbir noocaas ah ayay u badan tahay in la dilo oo la gubo (shimbiraha dhintay weli wali waa fayraska cudurka furuqa, dabku wuxuu burburiyaa 100%). Xaaladaha kale, daaweyn waxtar leh ayaa loo baahan doonaa, taas oo ay ku jirto maaha oo keliya in la diyaariyo daawooyinka qaarkood ee shimbirta, laakiin sidoo kale tallaabooyinka qaarkood ee loogu talagalay nadiifinta dibadda ee maqaarka, nadiifinta indhaha iyo sanka. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in waxtarka daaweynta ay ku xiran tahay sida dhakhsaha ah ee loo bilaabay daaweynta - marxaladda dambe ee cudurka, daaweynta cudurka furuqa wuxuu waxtar u yeelan doonaa kaliya 15% kiisaska.
Daaweynta cudurka furuqa, antibiyootikada waxaa loo isticmaalaa kaliya daaweyn xagjirnimo ah - haddii kiniiniga jeermiska iyo nidaamka jeermi-dilka aan shaqeynin. Koorsada daaweynta antibiyootiggu waxay socotaa 5 ilaa 9 maalmood, halka barbaro ay ku jirto xayawaanka la siiyo qudaarta vitamin-ka (daawooyinka antibiotica si aad ah u yareynaya difaac). Maandooriyeyaasha waxaa lagu duray labadaba subagga (qoorta) iyo guntan (oo ah gobolka muruqyada murqaha). Mararka qaar antibiyootikada waxaa lagu kala diraa biyaha waxayna ku shubaan qaybaha giigga ee qoolley kasta.
Akhri sida loo daweeyo hablo-baasta iyo coccidiosis ee kiniisadda.
Antibiyootigyada soo socda ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo furuqa xashiishka:
"Tetracycline". Daawada ayaa loogu talagalay isticmaalka dibadda, balaadhani balaaran. La dagaalanka infakshanka bakteeriyada ee noocyo kala duwan, si waxtar leh u tirtira fayruuska furuqa oo ka yimaada xuubka xuubka indhaha iyo sanka qashinka. Waxaa lagu soo saaraa qaabka dhibcaha, boomaatada iyo kiniinnada. Si loo baabi'iyo "cough jaalle ah" daroogada ayaa lagu qasi karaa biyaha (oo ah saamiga 1: 4) iyo saddex jeer maalintii maalinta qoortu xanuunsanayso indhaha iyo gaajo. Kiniiniyada Tetracycline waa la jajabiyey waxayna kuxireen xayawaanka roodhiga ah, taas oo xayawaanka cunaya - taasi waxay ka caawisaa in laga tirtiro faayraska furuqa ee ka yimaada xubnaha gudaha ee shimbirta. Qiyaasta maalin kasta ee "Tetracycline", oo lagu qaato afka (afka ama cirbadda), xamaamka yaryar waa inuusan ka badneyn 50 mg - sidaas darteed, daaweynta antibiyootigani sida caadiga ah, waxay noqoneysaa mid af ama hadal ah. Gaar ahaan waxtar leh waa isku dhafka "tetracycline" oo leh fitamiino B12, A iyo D2. Biyaha tetracycline ayaa sidoo kale daaweeya maqaarka furuqa ee saameeya. Koorsada daaweynta antibiyootigani waa 5 ilaa 8 maalmood.
"Tilan". Daawada Daawada Daawada Dabaysha ee loo yaqaan "Antibacterial" ayaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo digaagga, iyo sidoo kale xoolaha yar yar iyo kuwa waaweyn. Daaweynta xayawaanka furuqa waxay siinaysaa "Tilan" oo ah qiyaasta 0.5 g oo budo ah halkii litir oo biyo ah. Qiyaasta maalin kasta ee xalku u leeyahay 1 xabbo ee waa inuusan ka badnayn 40-50 ml, sidaas darteed, sida caadiga ah, "Tilan" oo la kala diro ayaa lagu daadiyaa shimbirta guska leh tube. Antibiyootigani noocan oo kale ah oo kaliya ma guulaysan karo ciriiriga iyo bararka guga, laakiin sidoo kale wuxuu nadiifiyaa xubnaha gudaha. Koorsada caadiga ah ee daaweynta waa 5 maalmood, mudada ugu badan ee isticmaalka antibiyootigani waa ilaa 8 maalmood.
"Enrofloxacin". Daawada antibiyootigga ah ee ballaaran oo si firfircoon u dagaallamaya bakteeriyada coccoid iyo cudurada bakteeriyada. "Enrofloxacin" waxaa inta badan loo isticmaalaa daaweynta afka - antibiyootigga waxaa lagu qasi karaa biyo (5 ml 10 ml oo biyo ah), ku shubtay cabitaan iyo in la siiyo xayawaan qaba cudurka halkii biyo caadi ah. Koorsada daaweyntu waxay socotaa ilaa 6 maalmood. Antibiyootigani wuxuu saameyn xun ku yeelan karaa kelyaha shimbiraha, sidaa daraadeed, iyadoo joogitaanka cudurada kelyaha ama cudurrada kale ee cudurkan, Enrofloxacin looma isticmaali karo.
Ka dib marka la daaweeyo antibiyootiko, shimbirta waa in ay bixiso probiotics, taas oo soo celisa microflora mindhicirka. Inta lagu jiro daweynta daawooyinka ku qoran, xamaamyada, sida qaanuunku, waxay bilaabaan in ay la kulmaan faytamiin A-ga ah - waxay bilaabi karaan foosha ama maqaarka maqaarka, baalasha, iwm. Faytamiin A waa in si caan ah loo maamulo antibiyootiko adoo ku daraya fitamiin gaar ah oo la siiyo quudinta.
Si looga hortago salmonellosis iyo cudurada Newcastle ee xamaamadda, daroogada Virosalm ayaa loo isticmaalaa.
Talaalku wali waa habka ugu wanaagsan ee looga hortago furuqa. Yaryar yaryar ilaa hal sano waa in la tallaalaa inta u dhexeysa 8 illaa 11 toddobaad ee da'da. Cirbadda ayaa lagu sameeyaa xuubka garabka ama maqaarka maqaarka. Habka ugu fiican ee tallaalka waa kuwa soo socda:
Dumbfarm. Tallaalka nool ee laga soo saaray Slovakia. Waxay ka kooban tahay xaddiga yar ee fayruuska furuqa, kaas oo, marka uu qaniinay qashin, wuxuu kicinayaa difaacida wax soo saarka unugyada, kaas oo markaa ka hortagi kara weerarka fayraska furuqa halista ah. Qaadashada daawadan waxay dhacdaa hal mar kaliya shimbirta nolosheeda, waxa kale oo suurtagal ah in la tallaalo shimbir horay loo soo celiyay (si looga fogaado soo noqoshada). Tallaalkani wuxuu ka kooban yahay qallalan qallalan oo ku jira shuban daboolay, iyo dareeraha gaarka ah. Xalka tooska ah ee la isku duro ayaa la abuuraa iyada oo la kala dirayo qaybta qalalan ee daroogada ee ka kooban halabuurka. Faahfaahin faahfaahsan oo loogu talagalay isticmaalka ayaa lagu daray baakadka alaabta Tallaalkan waxaa si caadi ah loo geliyaa xuubka garabka ee xamaam oo gaartay ugu yaraan 6 toddobaad oo da 'yar, oo kaliya qoorta cagaaran ayaa la tallaalayaa.
Avivak. Tallaalka cudurka furuqa oo ka kooban qayb ka mid ah dhaqanka qallalan iyo khafiifin gaar ah Cadaadiska "K" (xal of glycerol iyo phosphate). Talaalka waxaa loo samayn karaa shimbir ka weyn 2 bilood - in difaac cayayaanka ah sida joogtada ah waxay ku sii jiri doontaa noloshiisa oo dhan. Qiyaasta lagu taliyey ee cirbadeynta waa 0.013-0.015 cu. fiirsashada jawaab-celinta tallaalkani waxay iman kartaa 5-8 maalmood ka dib tallaalka - boogaha yaryar ee yar yar (boogga yar) ayaa ka muuqan doona garabka iyo gadaasha qoryaha, taas oo ku dhaafi doonta 25-30 maalmood.
Columba Tallaalkani, sida ka duwan labada hore, wuxuu ka kooban yahay dareeraha oilyada oo si buuxda u diyaarsan u isticmaalida. Talaalka waxaa lagu samayn karaa qoob ka ciyaarka dhalinyarada ah ee gaaray 4 toddobaad. Qaadashada shimbirta shimbirta waa 0.3 ml oo dareere ah, kaas oo la soo saaro subag ahaan (maqaarka maqaarka cagaha). Dareenka daroogada ayaa soo baxaya 14 maalmood. Tallaalka daroogadaasi waxay noqon kartaa hal mar ama sanadkiiba (13kii biloodba mar). Talaalkani waa mid gebi ahaanba amaan ah, kiisaska dhifka ahna wuxuu keenaa waxyeello yar (muuqaalka kore ee beedka meesha laga duray, oo ka baxaysa 4-6 maalmood).
Ka hor inta aan la tallaalin, shimbirku waa inuu si habboon u diyaarsan yahay: Sii cunno cunto dheellitiran 3-4 toddobaad ka hor taariikhda la filayo tallaalka, ku dar faytamiin gaar ah cuntada. Waxaa muhiim ah in la xasuusto inta lagu jiro tallaalka antibiyootigga tallaalka si buuxda looga saaro.
Soo ogow cudurrada cayayaanka ay khatar u yihiin bani-aadamka, iyo dawooyinka loo isticmaalo daaweynta shimbirahan.
Marka lagu daro daaweynta antibiyootigga, daaweynta fayruuska furuqa, waxaad isticmaali kartaa hababka habboon. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Nadiifinta boronka. Maqaarka la taaban karo waxaa lagu daaweeyaa suufka nadiifka ah qoyan oo leh xalka boric acid (2%). Haddii dib u noqoshada adag ee hore u muuqday maqaarka, ka dib markii daaweynta boronka, waa in si tartiib ah looga saaraa qalin lyapisny (ama diyaarin kale oo la mid ah antiseptic).
"Lozeval". Daawada ka hortagga faafa ee si guul leh u baabi'isa finanka furuqa. Diyaargarowga waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo maqaarka iyo baadad ee xayawaan buka, ka dib markii saacad ka dib saacadaha la daweeyay ee maqaarka ayaa lagu sii deyn karaa bacriminta tetracycline.
Iodine Qalab aad u fiican oo loola macaamilayo qolofta cufan ee furuqa furuqa. Xajka suufka oo qoyaan leh iodine si tartiib ah ayuu u gubayaa nabarada maqaarka shimbirta, ka dibna markaa meelaha la daweeyay waxaa lagu miiray kareemka qoyan. Intaa waxaa dheer, iodine waxaa loo isticmaali karaa qashinka iyo qalabka ku yaala. Iyada oo biyo lagu daro (1:10 saamiga), dhammaanba dusha sare ee xayrta ayaa la buufinayaa. Shimbirta lafteeda, nidaamka noocan oo kale ah waa wax aan waxba tarayn.
Nadiifinta biyaha la cabo ee kiniinka. Waxaa loo isticmaalaa marka antibiyootigga aan lagu tirtirin biyaha. Nadiifinta biyaha la cabbo waxay ku dhacdaa iyada oo lagu kala diri karo xal daciif ah oo ah kaneecada. Biyaha la daweeyey ayaa lagu meeleeyaa cabitaanka - tani waxay ka hortagtaa faafinta fayruska qolfaha. Sidaa si la mid ah, biyaha waxaa lagu buufin karaa iyadoo la isticmaalayo iodiin, chloramine ama furatsilina.
Marka lagu daro daaweynta qajaarka si toos ah u saameeyey, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo habka kalluunka shimbiraha (guryaha qoryaha, deyrarka, iwm.). Ujeedadaas awgeed, dusha ayaa lagu nadiifiyaa xal iodine ama xal sulfate ah, iyo daaweynta aerosol ayaa sidoo kale loo isticmaalaa (tusaale ahaan, baayirada Deutran).
Waxaan kugula talineynaa inaad baratid sida loo sameeyo dovecote, hudheello, qufac iyo cabitaanno qashin leh gacmahaaga.
Si looga fogaado khatarta muuqaalka fayruuska furuqa ee xayawaanka, waxaa la isticmaali doonaa dhowr tallaal oo ka hortag ah. Kuwaas waxaa ka mid ah:
jeermi-xilliyeedka xayawaanka-guriga leh iodine ama xalka maadada loo yaqaan vitriol (2-3 bilood kasta);
bixinta cunto isku dheeli tiran oo xoog leh (marmar ku dar saliid gabbaldayaha ama saliida kalluunka si aad u quudiso);
la dagaallanka cayayaanka, xakameynta dovecote (caarada, duqsiyada, iwm);
marin jeermis oo biyo ah (ugu yaraan hal mar bishii si loogu siiyo cabitaan biyo leh xal xashiishadda potassium);
nadiifinta fayadhowrka nadiifinta ee dovecote, nadiifinta naas-nuujiyaha iyo khamriga leh walxaha bakteeriyada;
daaweynta muddooyinka ah ee maqaarka iyo bucooyinka shimbiraha leh barta antiseptic;
gelinta shimbiraha cusub (dhalaanka cusub ama kuwa la iibsaday) si gooni ah uga soo bixiya idaha ugu muhiimsan waxay caawin doonaan in la ogaado shimbiraha jiran.
Cudurka furuqa waa cudur fayras oo halis ah kaas oo inta badan saameeya labada xabbadood ee gudaha iyo duurka. Furaha daaweynta digaaga ee guuleysta ma aha oo kaliya daaweynta waqtiga daaweynta iyo bakteeriyada anti-bakteeriga ee guriga qoryaha, laakiin sidoo kale tallaal waqtigii loo baahnaa iyo tallaabooyin ka hortag ah. Ha ilaawin inaad tallaalato oo aad dib u hesho shimbiraha si gooni gooni ah - kani wuxuu kaa caawinayaa ka hortagga faafidda fayras suurtogal ah ee shimbiraha caafimaad qaba.